စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာ ၁ နှစ်ပြည့်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို သွေးမထွက်တဲ့ ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် Silent Strike (အသံတိတ်သပိတ်) မှာပူးပေါင်းပါဝင်သူ၊ သပိတ်မှာ ပါဝင်လာဖို့ စည်း ရုံးသူ တွေကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အပါအဝင် နှစ် ရှည်ထောင်ချ နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပြင်းပြင်း ထန်ထန် အရေးယူမယ်လို့ စစ်ကောင်စီဘက်က ထုတ်ပြန် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုထုတ်ပြန် လိုက်တာက ပြည်သူတဦးချင်းဆီရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဘယ်လောက်ထိခိုက် စေပါသလဲ။ ထုတ်ပြန် ချက်တွေက ဥပဒေနဲ့ညီပါရဲ့လား ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ် လို့ ရန်ကုန်က ပေးပို့လာတဲ့ သတင်းကို ကိုအောင်လွင်ဦးကပြောပြပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရပ်သားအစိုးရ ဆီကနေ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်း ယူခဲ့တာ တနှစ်ပြည့်တဲ့ လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်နေ့မှာ တနိုင်ငံလုံး စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ Silent Strike (အသံတိတ်သပိတ်) လှုပ်ရှားကြဖို့ လူမှုကွန်ရက်တွေမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ တိုက်တွန်းနေချိန်မှာပဲ စစ်ကောင်စီရဲ့ သတိပေးချက် ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ အသံတိတ်သပိတ် လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်သူတွေ၊ စည်းရုံးသူတွေကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အပါအဝင် နှစ်ရှည်ထောင်ချ နိုင်တဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်း သတိပေးလိုက်တာဟာ ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ တဦးက ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။
" နိုင်ငံသားတဦးက သူ့အိမ်ထဲမှာ အိမ်ပြင်ကိုမထွက်ဘူး။ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတယ်ဆိုတာသည် ဒါရာဇဝတ်မှုမှမဟုတ်တာ။ ကြည့်လိုက်တော့ ၁၂၄-ကဆိုတာက နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပေါ့။ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေး ၃၃ (က)ဆိုတာကလည်း ဒါနဲ့တူတူပါဘဲ. ၅၀၅-က ဆိုတာကလည်း ပြဌာန်းချက်အရဆို Silent Strike နဲ့ အကျုံးမဝင်ဘူး. ဒီပြဌာန်းချက်က ဥပဒေနဲ့ညီညွှတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး. ဘာလို့ဆို မူရင်းဥပဒေမှာကိုက ပါဝင်မထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ ကောက်ယူပြီးတော့မှ ဒါနဲ့ ချိတ်ဆက်မရရအောင် ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့လည်း လတ်တလောအနေအထားအရ ဖမ်းခံဆိုလဲဖမ်းခံရမယ်။ ထောင်ချခံရမယ်ဆိုလဲ ထောင်ချခံရမယ်ဆိုတော့ အဖမ်းတော့ခံရမှာပေါ့။ ဒါမယ့်နိုင်ငံတကာဥပဒေသမားဘဲမေးမေး ပြည်တွင်းဥပဒေသမားဘဲမေးမေး ဒီဆောင် ရွက်ချက်က ဥပဒေနဲ့ညီတယ်လို့ ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ ဘယ်သူမှလည်းထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး "
စစ်ကောင်စီကတော့ Silent Strike (အသံတိတ်သပိတ်) ပြုလုပ်တာ၊ လက်ခုပ်တီး၊ သံပုံးတီးတာ၊ ကားဟွန်းတီးတာ စတဲ့ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကို အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၂(က)၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၂၄-က၊ ပုဒ်မ၅၀၅-က၊ အီလက်ထရောနစ် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပ‌ဒေပုဒ်မ ၃၃(က) အပြင် တခြား တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ပါ အရေးယူမယ်လို့ အင်္ဂါနေ့မှာပဲ သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကသကျောင်းသားဟောင်းအင်အားစုက ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုပိုင်ရဲသူကတော့ စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံသား တွေရဲ့ မူလ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တဲ့လုပ်ရပ်လို့ ဆိုပါတယ်။
"အဓိကကတော့ လူတယောက်ကဗျာ သူ့ရဲ့မွေးလာကတည်းက သူ့အခွင့်အရေးနဲ့ သူ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ ရှိထားပြီးသား။ ကျနော်တို့မှာ ကျနော်တို့သွားခြင်းလာခြင်းတွေ စားခြင်းသောက်ခြင်းတွေ၊ အရာရာတိုင်းကကျနော်တို့ပိုင်တယ်။ ကိုယ်ရပ်ချင်ရပ်လို့ရ တယ်။ ကိုယ်သွားချင်သွားရတယ် အများပြည်သူမထိခိုက်ရင် ကိုယ်ကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ ဒါက နိုင်ငံသားတွေမှာ ပါလာတဲ့မူလ အခွင့်အရေးတွေပေါ့။ အဲဒါအပေါ် စစ်ကောင်စီကလိုက်လံပြီးတော့ ဆိုင်ဖွင့်ရမယ်တွေ၊ မဖွင့်ရဘူးပိတ်ရမယ်တွေ၊ မပိတ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာ မျိုးတွေလိုက်လုပ်တဲ့ဟာက စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုအတင်းအဓမ္မချိုးဖောက်တာလို့မြင်တယ်။ ကျနော်တို့ က ကျနော်တို့အခွင့်အရေးအပေါ်ရပ်တည်ရမှာပါ။ ကျနော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲ ကျနော်တို့ရပ်တန့်မှာလား။ အဲဒါဆိုရပ်မယ်။ သွားမှာလား သွားလိုက်မယ်။ ဆိုင်ဖွင့်မလားဖွင့်လိုက်မယ်။ ပိတ်မလားပိတ်လိုက်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မူလ ရပ်တည်မှုကိုပြည်သူတွေကရပ်တည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲပေါ်မှာစစ်ကောင်စီဖိနှိပ်မှုတွေအကုန်လုံးက စစ်ကောင်စီနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဒီလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု အကုန်လုံးကပေါ့"
စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားစွဲမယ့် ပုဒ်မတွေရဲ့ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ၅၂(က)က ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ် ၊ နိုင်ငံတော်အကြည်အညို ပျက်အောင် လုပ်ဆောင်မှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၂၄-က ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ထိ ၊တပ်မတော်အကြည်ညို ပျက် အောင်လုပ်ဆောင်မှု ၅၀၅-ကအီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် ရေးဥပ‌ဒေပုဒ်မ ၃၃(က) တို့ကတော့ ထောင် ၃နှစ် ချမှတ် နိုင်ပါတယ်။
အသံတိတ်သပိတ် လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်သူတွေကို တည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့ တရားစွဲဆိုမှာဖြစ်ပြီး ပြစ်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်း၊ မရွှေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် နိုင်ငံဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းမယ်လို့လည်း သတိပေးထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မတ်လနဲ့ ဒီဇင်ဘာလတွေမှာလည်း စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်တဲ့ အသံတိတ်သပိတ် လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိခဲ့ရာမှာ အာဏာပိုင်တွေက ပါဝင်သူတွေကို အရေးယူတာတွေ၊ ပစ္စည်းသိမ်းယူတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ပြောပါတယ်။
အသံတိတျသပိတျ လှုပျရှားမယျ့ သူတှကေို စဈကောငျစီ သတိပေး
စဈတပျကအာဏာသိမျးတာ ၁ နှဈပွညျ့အဖွဈ မွနျမာနိုငျငံမှာ စဈအာဏာသိမျးမှုကို သှေးမထှကျတဲ့ ဆနျ့ကငျြဆန်ဒပွ လှုပျရှားမှုအဖွဈ Silent Strike (အသံတိတျသပိတျ) မှာပူးပေါငျးပါဝငျသူ၊ သပိတျမှာ ပါဝငျလာဖို့ စညျး ရုံးသူ တှကေို အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒေ အပါအဝငျ နှဈ ရှညျထောငျခြ နိုငျတဲ့ ဥပဒတှေနေဲ့ ပွငျးပွငျး ထနျထနျ အရေးယူမယျလို့ စဈကောငျစီဘကျက ထုတျပွနျ လိုကျပါတယျ။ ဒီလိုထုတျပွနျ လိုကျတာက ပွညျသူတဦးခငျြးဆီရဲ့ လှတျလပျခှငျ့ကို ဘယျလောကျထိခိုကျ စပေါသလဲ။ ထုတျပွနျ ခကျြတှကေ ဥပဒနေဲ့ညီပါရဲ့လား ဆိုတာနဲ့ပတျသတျ လို့ ရနျကုနျက ပေးပို့လာတဲ့ သတငျးကို ကိုအောငျလှငျဦးကပွောပွပေးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ အရပျသားအစိုးရ ဆီကနေ စဈတပျက အာဏာသိမျး ယူခဲ့တာ တနှဈပွညျ့တဲ့ လာမယျ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁ရကျနမှေ့ာ တနိုငျငံလုံး စဈအာဏာသိမျးမှုကို ဆနျ့ကငျြတဲ့ Silent Strike (အသံတိတျသပိတျ) လှုပျရှားကွဖို့ လူမှုကှနျရကျတှမှော တကျကွှလှုပျရှားသူတှေ တိုကျတှနျးနခြေိနျမှာပဲ စဈကောငျစီရဲ့ သတိပေးခကျြ ထှကျပျေါလာတာပါ။ အသံတိတျသပိတျ လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျသူတှေ၊ စညျးရုံးသူတှကေို အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒေ အပါအဝငျ နှဈရှညျထောငျခြ နိုငျတဲ့ ဥပဒတှေနေဲ့ ပွငျးပွငျးထနျထနျ အရေးယူမှာဖွဈကွောငျး သတိပေးလိုကျတာဟာ ဥပဒနေဲ့မညီဘူးလို့ တရားလှတျတျောရှနေ့ေ တဦးက ဝဖေနျလိုကျပါတယျ။
" နိုငျငံသားတဦးက သူ့အိမျထဲမှာ အိမျပွငျကိုမထှကျဘူး။ တိတျတိတျဆိတျဆိတျနတေယျဆိုတာသညျ ဒါရာဇဝတျမှုမှမဟုတျတာ။ ကွညျ့လိုကျတော့ ၁၂၄-ကဆိုတာက နိုငျငံတျောအကွညျညိုပကျြစမှေုပေါ့။ အီလကျထရောနဈဆကျသှယျရေး ၃၃ (က)ဆိုတာကလညျး ဒါနဲ့တူတူပါဘဲ. ၅၀၅-က ဆိုတာကလညျး ပွဌာနျးခကျြအရဆို Silent Strike နဲ့ အကြုံးမဝငျဘူး. ဒီပွဌာနျးခကျြက ဥပဒနေဲ့ညီညှတျစရာအကွောငျးမရှိဘူး. ဘာလို့ဆို မူရငျးဥပဒမှောကိုက ပါဝငျမထားတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ကောကျယူပွီးတော့မှ ဒါနဲ့ ခြိတျဆကျမရရအောငျ ဆှဲမယျဆိုရငျတော့လညျး လတျတလောအနအေထားအရ ဖမျးခံဆိုလဲဖမျးခံရမယျ။ ထောငျခခြံရမယျဆိုလဲ ထောငျခခြံရမယျဆိုတော့ အဖမျးတော့ခံရမှာပေါ့။ ဒါမယျ့နိုငျငံတကာဥပဒသေမားဘဲမေးမေး ပွညျတှငျးဥပဒသေမားဘဲမေးမေး ဒီဆောငျ ရှကျခကျြက ဥပဒနေဲ့ညီတယျလို့ ဘယျသူမှမပွောဘူး။ ဘယျသူမှလညျးထောကျခံမှာမဟုတျဘူး "
စဈကောငျစီကတော့ Silent Strike (အသံတိတျသပိတျ) ပွုလုပျတာ၊ လကျခုပျတီး၊ သံပုံးတီးတာ၊ ကားဟှနျးတီးတာ စတဲ့ ဆနျ့ကငျြလှုပျရှားမှုတှမှော ပါဝငျပတျသကျသူတှကေို အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒပေုဒျမ ၅၂(က)၊ ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၁၂၄-က၊ ပုဒျမ၅၀၅-က၊ အီလကျထရောနဈ ဆကျသှယျဆောငျရှကျရေးဥပ‌ဒပေုဒျမ ၃၃(က) အပွငျ တခွား တညျဆဲဥပဒတှေနေဲ့ပါ အရေးယူမယျလို့ အင်ျဂါနမှေ့ာပဲ သတိပေးခကျြ ထုတျပွနျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။
တကသကြောငျးသားဟောငျးအငျအားစုက ကြောငျးသားခေါငျးဆောငျ ကိုပိုငျရဲသူကတော့ စဈကောငျစီရဲ့လုပျရပျဟာ နိုငျငံသား တှရေဲ့ မူလ အခှငျ့အရေးကို ခြိုးဖောကျတဲ့လုပျရပျလို့ ဆိုပါတယျ။
"အဓိကကတော့ လူတယောကျကဗြာ သူ့ရဲ့မှေးလာကတညျးက သူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ သူ လူ့ဂုဏျသိက်ခာဆိုတာ ရှိထားပွီးသား။ ကနြျောတို့မှာ ကနြျောတို့သှားခွငျးလာခွငျးတှေ စားခွငျးသောကျခွငျးတှေ၊ အရာရာတိုငျးကကနြျောတို့ပိုငျတယျ။ ကိုယျရပျခငျြရပျလို့ရ တယျ။ ကိုယျသှားခငျြသှားရတယျ အမြားပွညျသူမထိခိုကျရငျ ကိုယျကွိုကျတာလုပျခှငျ့ရှိတယျ။ ဒါက နိုငျငံသားတှမှော ပါလာတဲ့မူလ အခှငျ့အရေးတှပေေါ့။ အဲဒါအပျေါ စဈကောငျစီကလိုကျလံပွီးတော့ ဆိုငျဖှငျ့ရမယျတှေ၊ မဖှငျ့ရဘူးပိတျရမယျတှေ၊ မပိတျရဘူးဆိုတဲ့ဟာ မြိုးတှလေိုကျလုပျတဲ့ဟာက စဈကောငျစီအနနေဲ့ လူ့အခှငျ့အရေးနဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကိုအတငျးအဓမ်မခြိုးဖောကျတာလို့မွငျတယျ။ ကနြျောတို့ က ကနြျောတို့အခှငျ့အရေးအပျေါရပျတညျရမှာပါ။ ကနြျောတို့ဘာလုပျမှာလဲ ကနြျောတို့ရပျတနျ့မှာလား။ အဲဒါဆိုရပျမယျ။ သှားမှာလား သှားလိုကျမယျ။ ဆိုငျဖှငျ့မလားဖှငျ့လိုကျမယျ။ ပိတျမလားပိတျလိုကျမယျ။ ကိုယျ့ရဲ့မူလ ရပျတညျမှုကိုပွညျသူတှကေရပျတညျရမှာဖွဈပါတယျ။ အဲပျေါမှာစဈကောငျစီဖိနှိပျမှုတှအေကုနျလုံးက စဈကောငျစီနဲ့သကျဆိုငျတယျ။ ဒီလူ့အခှငျ့အရေးခြိုးဖောကျမှု အကုနျလုံးကပေါ့"
စဈကောငျစီဘကျကတရားစှဲမယျ့ ပုဒျမတှရေဲ့ အမွငျ့ဆုံးပွဈဒဏျတှကေတော့ အကွမျးဖကျမှု တိုကျဖကျြရေးဥပဒပေုဒျမ ၅၂(က)က ထောငျဒဏျ ၁၀နှဈ ၊ နိုငျငံတျောအကွညျအညို ပကျြအောငျ လုပျဆောငျမှု ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၁၂၄-က ထောငျဒဏျ နှဈ ၂၀ထိ ၊တပျမတျောအကွညျညို ပကျြ အောငျလုပျဆောငျမှု ၅၀၅-ကအီလကျထရောနဈဆကျသှယျဆောငျရှကျ ရေးဥပ‌ဒပေုဒျမ ၃၃(က) တို့ကတော့ ထောငျ ၃နှဈ ခမြှတျ နိုငျပါတယျ။
အသံတိတျသပိတျ လှုပျရှားမှုမှာ ပါဝငျသူတှကေို တညျဆဲဥပဒတှေနေဲ့ တရားစှဲဆိုမှာဖွဈပွီး ပွဈမှုနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ ရှပွေ့ောငျးနိုငျတဲ့ပစ်စညျး၊ မရှပွေ့ောငျးနိုငျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေိုအကွမျးဖကျမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒအေရ ပွဈမှုထငျရှားရငျ နိုငျငံဘဏ်ဍာအဖွဈ သိမျးဆညျးမယျလို့လညျး သတိပေးထားပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့နှဈ မတျလနဲ့ ဒီဇငျဘာလတှမှောလညျး စဈအာဏာသိမျးမှု ဆနျ့ကငျြတဲ့ အသံတိတျသပိတျ လှုပျရှားမှုတှေ ရှိခဲ့ရာမှာ အာဏာပိုငျတှကေ ပါဝငျသူတှကေို အရေးယူတာတှေ၊ ပစ်စညျးသိမျးယူတာတှေ ရှိခဲ့တယျလို့လညျး တကျကွှလှုပျရှားသူတှကေ ပွောပါတယျ။